वृद्धाश्रममा भेट भएका नातिनी र हजुरआमाको भाइरल तस्बिरबारे, बास्तविक रुवाउने कथा
काठमाडौँ । भनिन्छ एउटा तस्बिरले हजार भन्दा धेरै शब्द बोल्ने क्षमता राख्छ । यस्तै एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ।
तस्बिरलाई विभिन्न कथा बनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको छ। खासमा यो तस्बिर सन् २००७ मै भारतको गुजरातका एकजना फोटो पत्रकारले खिचेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएको यो तस्बिरमा लेखिएको छ, ’एक स्कुलले आफ्नो बच्चाहरुलाई वृद्धाश्रमको भ्रमण गरायो। त्यही क्रममा भ्रमणमा रहेकी बालिकाले वृद्धाश्रममा आफ्नी हजुरआमालाई भेटिन् ।’
यो फोटोको कथा यतिमै सकिँदैन । ’खासमा जब यी बालिकाले आफ्ना माता(पितासँग हजुरआमाबारे सोधिन् तब उनीहरुले नातेदारलाई भेट्न गएको जवाफ दिए ।
तस्बिरको सत्य के हो ? तस्बिरसँगै लेखिएको कुरा वास्तवमै सत्य हो त ? यसको जवाफ भारतका एकजना वरिष्ठ फोटो पत्रकार कल्पित भचेचले बीबीसीलाई बताएका छन् ।
मैले त्यही बेलाको तस्बिर धमाधम क्यामेरामा कैद गरेँ । त्यसपछि मैले तत्कालै गएर रोइरहेकी वृद्धालाई सोधेँ, ’तपाईँ किन रुनु भयो ?, उनले भनिन्, ’हामी दुई हजुरआमा(नातिनी हौँ ।’
बालिकाले पनि रुँदै ती वृद्धा आफ्नी ’बा’ हजुरआमा भएको बताइन् । गुजरातीमा हजुरआमालाई बा भनेर बोलाइन्छ । बालिकाले त्यही क्रममा हजुरआमाबिना आफ्नो जिन्दगी धेरै शून्य भएको बताइन् ।
मेरो ३० वर्षको करिअरमा पहिलो पटक फोटो छापिएपछि मलाई मानिसहरुले हजारौँ फोन गरे । त्यो बेलामा पुरै राज्यमा यस तस्बिरको चर्चा भएको थियो । तर जब म दोस्रो दिन अन्य पत्रकारसहित उनको अन्तर्वार्ता लिन पुगेँ, तब उनले मलाई आफू आफ्नो राजीखुसीले घर छाडेर वृद्धाश्रम आएको जवाफ दिइन् । बीबीसी
annapurna post, sorce